Ingxelo kaNeil Armstrong
by U-Lee Joanne Collins, uMbhali oNcedisayo
Umntu Wokuqala Ukuhamba Ngenyanga
NgoJulayi 20, 1969, uNeil Armstrong waba ngowokuqala ukubeka unyawo kwenyanga. Wayeyinduna ye-Apollo 11, umyalelo wokuqala wokwenjenjalo ukwenyanga inyanga. UMongameli uJohan F. Kennedy wathembisa ngoMeyi 25, 1961 kwiNgcaciso ekhethekileyo kwiNgqungquthela ngokuBaluleka kwesiKhala "ukuhlalisa indoda kwenyanga nokuyibuyisela ngokuphepha kuMhlaba phambi kokuphela kweyhumi." I-National Aeronautic and Space Ulawulo (NASA) lwaphuhliswa ukufezekisa oku, kwaye uNeil Armstrong wangena kwinyanga kwathathwa "ukuthinjwa" kweMerika kwibala lokudlula indawo.
Imihla: Agasti 5, 1930 - Agasti 25, 2012
Eyaziwayo Njenge: Neil Alden Armstrong, uNeil A. Armstrong
I-Quote eyaziwayo: "Leyo yinyathelo elincinci [indoda], inkulu enkulu ixhamla uluntu."
Usapho kunye noBantwana
U-Neil Armstrong wazalelwa epulazini lika-Grandfather Korspeter kufuphi nasePakakoneta, eOhio, ngo-Agasti 5, 1930. Wayeyena mkhulu kunabantwana abathathu abazalwa nguStephen noViola Armstrong. Ilizwe lalingena kwiNkxwaleko enkulu , xa amadoda amaninzi engekho emsebenzini, kodwa uStephen Armstrong wakwazi ukuqhubeka esebenza njengomphicothi-zincwadi kwilizwe lase-Ohio.
Intsapho yathuthela kwidolophu enye yase-Ohio ukuya kwelinye njengoko uStefano wahlola iincwadi zezixeko kunye neeklasi ezahlukeneyo. Ngo-1944, bahlala ePakoneta, apho uNeil wagqiba isikolo esiphakamileyo.
Umfundi onobuchule nolwazileyo, u-Armstrong wafunda iincwadi ezingama-90 njengomgcini wokuqala kwaye waqhekeza ibanga lesibili ngokupheleleyo. Wadlala ibhola kunye nebhola esikolweni, kwaye wadlala uphondo lwe-baritone kwibandla lesikolo; Noko ke, umdla wakhe omkhulu kwiingqwembe kunye nokuhamba.
Intshisekelo yokuqala kwiFlying kunye neNdawo
Ukuthakazelisa kukaNeil Armstrong ngeenqwelo zeenqwelo-moya kwaqala ukususela kwiminyaka emibini ubudala; Kwaye xa uyise wayimthatha ukuya kwi-1932 yeSizwe soMkhosi we-Air eyayibanjelwe eCleveland. U-Armstrong wayeneminyaka eyisithandathu kuphela xa yena noyise bathatha inqwelo yokuqala yokuhamba ngeenqwelo zeenqwelo-moya kwi-Ford Tri-Motor, indiza yomgibeli ebizwa ngeTo Goose .
Baye ngeCawa kusasa ukuze bawubone indiza xa umqhubi wanikezela ukuhamba. Ngoxa uNeil wayevuyiswa, kamva unina wawaxabisa icawa.
Umama kaArmsstrong wamthengela itekisi yakhe yokuqala yokwakha umzekelo wendiza, kodwa oko kwakungowokuqala kuye. Wenza amanqaku amaninzi, kwiikiti kunye nezinye izinto kwaye wafunda indlela yokuphucula ngayo. Ekugqibeleni wakha ithokheni yomoya kwindawo yakhe phantsi ukuze ahlolisise i-dynamics ye-airflow kunye nefuthe layo kwiimodeli zakhe. U-Armstrong wathola imali ukuhlawula iimodeli zakhe kunye neemagazini malunga nokuhamba ngeemisebenzi ezinqamlekileyo, ukugaya imitshini, nokusebenza ebhakabhakeni.
Kodwa u-Armstrong wayefuna ukutyalela iindiza zangempela waza waqinisekisa umzali ukuba amvumele ukuba athathe izifundo ezindizayo xa efumana iminyaka engu-15. Wafumana imali malunga nezifundo ngokusebenza kwimakethi, ukwenza ukudiliva, kunye nokugcina amasheferensi kwi-pharmacy. Ngosuku lwakhe lokuzalwa eyi-16 wathola ilayisenisi yakhe yokuqhuba, ngaphambi kokuba abe nelayisenisi yokuqhuba.
Esikolweni esiphakeme, u-Armstrong wabeka izinto zakhe zokufunda ubunjineli bendalo, kodwa wayengaqinisekanga ukuba intsapho yakhe ingakwazi njani ukufumana iikholeji. Wafunda ukuba i-United States Navy yasindisa abantu abafundi abazimisele ukujoyina inkonzo. Wafaka isicelo kwaye wanikezwa i-scholarship.
Ngo-1947, wangena kwiYunivesithi yasePurdue e-Indiana.
Emva kweminyaka emibili kuphela apho, u-Armstrong wabizwa ukuba aqeqeshe njenge-airval cadet e-Pensacola, eFlorida, ngenxa yokuba ilizwe lalisemkhatsini wemfazwe eKorea . Ngebudeni bemfazwe, wahamba ngeentsimbi ezingama-78 zokulwa njengenxalenye yeqela lokuqala lo-jet fighter squadron.
Isekelwe kwi- USS Essex yomqhubi wendiza, iinjongo ezijoliswe kumabhanji nakwiifektri. Ngoxa kwakukho umlilo olwaphulo-moya, i-Armstrong yeenqwelo zimbini zikhubazekile. Kwakufuneka abe neparachute aze adibanise imoto yakhe. Ngenye ixesha wakwazi ukuhamba ngeenqwelo ezinobungozi ngokukhawuleza ebuyela kumphathi. Wamkela amayeza amathathu ngenxa yobungqina bakhe.
Ngo-1952, u-Armstrong wakwazi ukushiya i-navy aze abuye e-Purdue, apho wafumana i-BS yakhe yobunjineli be-Aeronautical ngoJanuwari, ngo-1955. Ngethuba wayelapho wadibana noJan Shearon, umfundi naye; NgoJanuwari 28, 1956, abo babini batshata.
Babenabantwana abathathu (amakhwenkwe amabini nentombazana), kodwa intombi yabo yafa eneminyaka emithathu ukusuka kwisisu somkhuhlane.
Ukuvavanya iMida yokukhawuleza
Ngo-1955, u-Neil Armstrong wajoyina iLebhan Flight Propulsion Lab yaseCleveland, eyayiyinxalenye yeKomiti yeeNational Advisory for Aeronautics (NACA) ngengalo yophando. (I-NACA yayiyi-presale ye-NASA.)
Kungekudala emva koko, u-Armstrong waya e-Edwards Air Force Base eCalifornia ukuba aphephe iiplanti zokulinga kunye nobugcisa obuphezulu. Njengomqhubi wophando, umqhubi wokuvavanya, kunye noonjiniyela, u-Armstrong wayenomdla, ekulungele ukuthatha ingozi, kwaye akwazi ukucombulula iingxaki. Wayephucule iindiza zakhe zokuqhuba i-raber-band kunye ne-Edwards, wancedisa ukuxazulula iingxaki ezivela kwi-design craft.
Ngaphaya kobomi bakhe, uNeil Armstrong wagijima ngaphezu kwe-200 iintlobo zomoya kunye nomklamo wendawo: iijets, i-gliders, ii-helicopter kunye neeplanethi ezinjenge-rocket ngesivinini esiphezulu. Phakathi kwezinye iindiza, u-Armstrong wagijima nge-X-15, indiza ephezulu. Ukuqaliswa ukusuka kwindiza esele ihambayo, yahamba ngeekhilomitha ezingama-3989 ngeyure - ngaphezu kwesihlandlo esihlanu kwisantya sesandi.
Ngethuba wayeseCalifornia, waqala isiGanga seSayensi yeNzululwazi kwi-Aerospace Engineering kwiYunivesithi yeSouth California. Wagqiba umgangatho wee-1970 - emva kokuhamba kwenyanga.
Uhlanga oluya kwindawo
Ngowe-1957, iSoviet Union yaqalisa iStutnik , i-satellite yokuqala, kwaye iUnited States yazanyazanyiswa kukuba yayiswele emva kwemizamo yokufikelela ngaphaya kwemida yoMhlaba.
I-NASA yayinemisebenzi emithathu ehleliweyo, ecwangciselwe ukuhlalisa indoda ngenyanga:
I-Mercury - imoto enye indoda eyayihamba ngeenkonzo ezintandathu (1961-1963)
I-Gemini - imoto yamadoda amabini ehamba ngemisebenzi elishumi (1965-1966)
Imoto ye-Apollo - indoda yesithathu eyayihamba ngeentsimbi ezili-11 (1968-1975)
Ngama-1959, u-Neil Armstrong wasebenzisa iNASA xa kwakufuneka ukhethe amadoda ayeza kuba yinxalenye yezi zihlolisiso. Nangona akakhethiweyo ukuba abe "yeSixhenxe" (iqela lokuqala lokuqeqesha isikhala), xa iqela lesibini labadlali, "i-Nine," likhethwe ngo-1962, u-Armstrong wayephakathi kwabo. ukukhethwa. Iimoto zeMercury zaphela, kodwa waqeqeshwa kwisigaba esilandelayo.
I-Gemini (inentsingiselo emibini) Iprojekthi yathumela amaqela angamadoda amabini kwi-orbit ehlabathini elishumi. Injongo yayikukuvavanya izixhobo kunye neenkqubo kunye nokuqeqesha abaqhubi kunye nabasebenzi basemhlabeni ukuba balungiselele uhambo oluya kwinyanga.
Njengenxalenye yale nkqubo, uNeil Armstrong noDavid Scott bahamba ngeGemini 8 ngo-Matshi 16, 1966. Isabelo sabo kwakufuneka bathabathe imoto ehamba phambili kwi-satellite esele ijikeleze umhlaba. I-satellite Agena yayijoliswe kuyo kwaye i-Armstrong yayifake ngempumelelo kuyo; Kwakuyixesha lokuqala ukuba izithuthi ezimbini zidibene ndawonye kwindawo.
I-mission yayihamba ngokugqibeleleyo kwaze kwafika imizuzu engama-27 emva kokuqhawula xa idibene kunye ne- Gemini yaqala ukukhupha. U-Armstrong wakwazi ukuphazamisa, kodwa uGemini wayelokhu ejikeleza ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza, ekugqibeleni waphendulela ngenye inguqulelo kwisibini. U-Armstrong wagcina ukuzola kunye neengcingo zakhe kwaye wakwazi ukuzisa umsebenzi wakhe phantsi kolawulo kwaye ukhusele ngokuphepha. (Ekugqibeleni kwagqitywa ukuba i-roll thruster ayikho.
8 kwi- Gemini yayingasebenzi kwaye ihlala iqhuma.)
Apollo 11: Ukuza kwiNyanga
Iprogram ye-NASA ye-Apollo yayiyinxalenye eyintloko kwi-mission yayo: ukuhlalisa abantu kwinyanga nokuyibuyisela ngokuphepha kuMhlaba. I-Apollo spacecraftcraftcraft, engekho enkulu kunokuba i-closet, iza kuqaliswa ngumbethi omkhulu.
U-Apollo wayeza kuthwala abathathu abajikelezileyo bejikeleze inyanga, kodwa kuphela amadoda amabini ayeza kuthatha imodyuli yokuhlalisa inyanga ukuya phezulu kwenyanga. (Indoda yesithathu iya kuqhubeka ijikeleza kwimodyuli yomyalelo, ukuyifotola kwaye ilungiselele ukubuyela kwabahlali beenyanga.)
Iinqela ezine ze-Apollo (Apollo 7, 8, 9, no-10) zixhobo kunye neenkqubo ezivivinywayo, kodwa iqela eliya kuthi lihlale kwenyanga lingakhethwa ngoJanuwari 9, 1969 xa i-NASA yamemezela ukuba uNeil Armstrong, u- Edwin "Buzz" uAldrin, Jr. , NoMichael Collins baza kuphayela i-Apollo 11 kunye nomhlaba ngenyanga.
Umxhwele wanyuka njengoko amadoda amathathu angena kwi-capsule e-rocket yokuqalisa ekuseni ka-Julayi 16, 1969. Kwakukho i-countdown eyaqala, "Ilishumi ... ezithoba ... ... kwindlela yonke eya kutsho, xa Ukuqhaqhaqhayisa kwaphakama ngo-9: 32 ngamanqanaba amathathu e-rocket yeSaturn yathumela umbhobho wendlela ehamba ngayo, ngalinye isigaba sishiya njengoko sisetyenzisiwe. Abantu abayizigidi babebukele ukuqaliswa kweFlorida kunye nezigidi ezingaphezu kwezi-600 ezibukele ngethelevishini.
Emva kohambo lweentsuku ezine kunye neendlela ezimbini ezinyangeni, i-Armstrong kunye ne-Aldrin yabuya e- Columbia kwaye, kunye neekhamera zethelevishini zithumela umqondiso kwakhona emhlabeni, zahamba ngeekhilomitha ezili-9 ukuya kwinyanga. Ngo-3: 17 ntambama (ixesha laseHouston) ngoJuni 20, 1969, batyhumela: "Ukhozi luye lwafika."
Kwiiyure ezithandathu emva koko, u-Neil Armstrong, kwi-spacesuit yakhe enobungakanani, wehla le nqanaba waza waba ngowokuqala ukuhamba kwindawo engaphandle. U-Armstrong wanikela ngesigcaziso sakhe:
"Enye inyathelo elincinci [indoda], inkunzi enkulu ixhamla uluntu." (Kutheni [a]?)
Malunga nemizuzu engama-20 kamva, uAldrin wajoyina uAstrstrong phezu komhlaba. U-Armstrong wachithe iiyure ezingaphezu kwama-2 nangesiqingatha ngaphandle kweyomodyuli yenyanga, ukutshala iiflegi yaseMerika, ukuthatha imifanekiso, nokuqokelela izinto zokubuyisela ukufundisisa. Abadlali ababini baphinda babuyela kwi- Eagle ukuze baphumle.
Iiyure ezingamashumi amabini anesigamu emva kokufika kwenyanga, i-Armstrong no-Aldrin babuyela e- Columbia baze baqala ukubuyela eMhlabeni. Ngo-12: 50 ntambama ngoJulayi 24, iCape Columbia yaqhuma e-Pacific Ocean, apho amadoda amathathu athathwe khona i-helicopter.
Ekubeni kwakungekho bani oye wanyanga kwinyanga, izazinzulu zazingxhalaba ukuba izazi zezinto zaziza kubuya kunye nezifo ezingaziwayo ezivela kwindawo; Ngaloo ndlela, u-Armstrong nabanye babesinqunyanyelwe kwiintsuku ezili-18.
Abadlali abathathu babengamaqhawe. Baye babingiswa nguMongameli we- US uRichard Nixon , bhiyozelwa ngeNew York, eChicago, eLos Angeles, nakwezinye iidolophu e-United States nakwihlabathi jikelele.
U-Armstrong wanikezelwa nguMongameli weMali yeNkululeko kunye nezinye izinto ezininzi. Phakathi kweentlonelo ezamkelayo kwakuMongameli weMongameli weNkululeko, i-Congressional Gold Medal, i-Congressional Space Medal of Honor, i-Exploration Club Medal, uRobert H. Goddard Memorial Trophy, kunye neNational Distinguished Medal Medal.
Iintlanganiso ezithandathu ezenziwa ngabantu zihanjiswe kwinkqubo ye-Apollo emva kweApollo 11. Nangona i-Apollo 13 yayingasebenzi ngenxa yoko kwakungabikho ndawo, abadlali abalishumi abathathu bajoyina iqela elincinci labahamba ngeenyanga.
U-Armstrong waqhubeka no-NASA kude kube ngo-1970, ekhonza indima eyahlukeneyo, kubandakanywa neSekela loMlawuli Ojongene neAeronautics eWashington, DC. Xa i- Space Shuttle Challenger yatshatyalaliswa kungekudala emva kokupheliswa komnyaka ngo-1986, u-Armstrong wamiselwa njengomphathi-sihlalo weKomishoni kaMongameli ukuba aphande ngengozi.
Phakathi kuka-1971 no-1979 u-Armstrong wayengunjingalwazi wobunjineli be-aerospace kwiYunivesithi yaseCincinnati. U-Armstrong wabuyela eCharlottesville, eVirginia, ukuba abe ngusihlalo we-Computing Technologies ye-Aviation, Inc. ukususela ngo-1982 ukuya ku-1991.
Emva kweminyaka engama-38 yomtshato, uNeil Armstrong nomkakhe uJan bahlukana ngo-1994. Ngaloo nyaka, watshata noCarol Held Knight ngoJuni 12, 1994, e-Ohio.
U-Armstrong wayemthanda umculo, eqhubeka edlala uphondo oluse-baritone njengoko wayesesikolweni esiphakeme, waze wenza iqela le-jazz. Njengomdala wavakalisa abahlobo bakhe nge piyano ye jazz kunye namabali ahlekisayo.
Emva kokuba u-Armstrong ethathe umhlala phantsi e-NASA, wayekhonza njengomkhulumeli wezohlukeneyo shishini zase-US, ngokugqithiseleyo kwiCrysler, General Tire, kunye neBankiers Association of America. Amaqela ezombusazwe ayeza kuye ukuba asebenze eofisini kodwa wenqaba. Wayengumntwana onamahloni kwaye xa ehlonishwa ngenxa yokufezekisa kwakhe, wagxininisa ukuba iinzame zeqela zazibalulekileyo.
Ukuqwalasela ibhajethi kunye nokuncipha inzala kuluntu kuholele kumgaqo kaMongameli uBarack Obama wokunciphisa iNASA nokukhuthaza iinkampani ezizimeleyo ukuphuhlisa izithuthi. Ngo-2010, u-Armstrong wavuma ukuba "uncedo oluninzi" kwaye wasayina igama lakhe, kunye nabanye abantu ababini abaye baxhamla neNASA, kwincwadi eya kuthiwa icebo lika-Obama "isiphakamiso esingalunganga esenza i-NASA ibangele imisebenzi yesikhundla somntu kwixesha elizayo. *
Ngomhla ka-Agasti 7, 2012, uNeil Armstrong waqulunqulwa ukukhupha umzobo okhuselekile. Wafa ngenxa yeengxaki kwi-Agasti 25, 2012 eneminyaka engama-82. Umlotha wakhe wawusasazeka kwi-Atlantic Ocean ngoSeptemba 14, emva komhla wokubakho umkhosi wesikhumbuzo owawubanjwe ngokuhlonipha kwakhe eWashington National Cathedral. (Enye yeefestile ezigcocekileyo kwiCathedral inomthwalo wenyanga owenziwe eMhlabeni ngu-Apollo 11 abasebenzi).
Hero of America
I-American ideal of what hero should look like and be like it was captured in this beautiful man, Midwestern man. UNeil Armstrong wayeyilumko, wayesebenza nzima, waza wazinikezela amaphupha akhe. Ukususela ekubonweni kwakhe kokuqala kweenqwelo zeenqwelo zangaphakathi kwi-National Air Show eCleveland, wayefuna ukuthatha esibhakabhakeni. Ukususela ekujonge kwakhe emazulwini nasekufundeni inyanga ngetelesiko yommelwane, wayephupha ekubeni yinxalenye yokuhlola indawo.
Iphupha lomfana kunye neenjongo zelizwe lihlangene ngo-1969 xa uAstrstrong ethatha "isinyathelo esincinane somntu" kwinyanga.
* Todd Halvorson, "Iimvenge zenyanga Ithi i-NASA i-Obama iyakuthatha indawo e-US" USA Today. Ngo-Apreli 25, 2014. [http://usatoday30.usatoday.com/tech/science/space/2010-04-14-armstrong-moon_N.htm]
Imbali yeLighter-Than-Air Craft
Biography kaMarilyn Monroe
Umbukeli woMlawuli waseByzantine uAlexius Comnenus
Abazalwana baseWright benza iNdiza yokuqala
UPapa uJulius II
Ukudibanisa nabamelwane: iProxima Centauri kunye ne-Rocky Planet yayo
I-Mystery of Ball Lightning
I-Water Element-Eninzi okanye Encinci?
Ukwahlukana phakathi koBulungisa kunye noKwazisa
I-Rakhi: Umxholo woLuthando
Ukuxhaswa: I-Skill ekhokelela kwiNombolo yeNombolo eqinile
Amaqela afanelekileyo kwi-Champions League kwiBhola leBhola
I-Denison University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-3-Digit yokuThathula amaWebhu (ezinye iRegrouping)
Indlela yokubala i-pH ye-acid Acid
Idatha Ayithethi: Iyona nto ininzi kakhulu (kwaye ixabiso leexabiso) Iindawo zokuhlala ze-Ski ukuvakashela
Iithethe zeKrismesi zeSigaba se-ESL
I-Ordnance engachangekanga eJamani
Ikhonkco phakathi kweBiomes kunye neMozulu
Umqeqeshi uqala iJumpers Long
Umbulali oyingqungquthela uCharles Ng - Umphathi wezoMthetho
Imvelaphi ye-Mahayana Buddhism
Ziziphi iifoto ezixubileyo?
I-10 Classic Iikhathuni zeHalloween
Indlela yokwenza iPhepha